dump (my) - Traduire SPIP
Traduction du module "dump" de fr vers my
info_restauration_sauvegarde Restauration de la sauvegarde @archive@ အရံသိမ်းထားသော@archive@ကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပါ 2013-10-03 16:21:38 Modifié Modifier
texte_admin_tech_02 Attention : cette sauvegarde ne pourra être restaurée QUE dans un site installé sous la même version de SPIP. Il ne faut donc surtout pas « vider la base » en espérant réinstaller la sauvegarde après une mise à jour… Consultez <a href="@spipnet@">la documentation de SPIP</a>. သတိပေးချက်။ ဤအရံသိမ်းဆည်းထားမှုကို မူကွဲတူသော SPIP အောက်တွင်သာ ပြန်လည်ထည့်သွင်း၍ ရနိုင်မည်။ သိုလှောင်မှုကို ဖျက်ပစ်ခြင်း လုံးဝလုံးဝ မပြုလုပ်သင့်ပါ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မြှင့်တင်မှုပြုပြီးရင် အရံသိမ်းဆည်းထားသော သိုလှောင်မှုကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် <a href="@spipnet@">SPIP စာရွက်စာတမ်းများ</a> ကိုလာလည်ပါ။ 2013-10-03 16:21:38 Modifié Modifier
irréversibles.</b> ဤရွေးချယ်မှုသည် အရံသိမ်းဆည်းထားသော သိုလှောင်မှုကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အရံသိမ်းဆည်းမှုကို @dossier@ အညွှန်းထဲတွင် ရှိမှဖြစ်မည်။ ဒီလုပ်ဆောင်မှုကို အထူးသတိပြုပါ။ <b>လုပ်ဆောင်မှုအမှား တစုံတရာ ရှိခဲ့ရင် ပြန်လည်ပြူပြင်၍ မရတော့ပါဘူး။</b> 2013-10-03 16:21:38 Modifié Modifier
bouton_restaurer_base Restaurer la base သိုလောင်မှု ပြန်ထည့်သွင်းရန် 2013-10-03 16:21:38 Traduit Modifier
info_sauvegarde Sauvegarde အရံသိမ်းဆည်းပါ 2013-10-03 16:21:38 Traduit Modifier
info_sauvegarde_reussi_02 La baseaété sauvegardée dans @archive@. Vous pouvez အချက်လက်သိုလှောင်မှုကို @archive@တွင်သင်သိမ်းနိုင်သည် 2013-10-03 16:21:38 Traduit Modifier
info_sauvegarde_reussi_03 retourner à la gestion စီမံခန့်ခွဲမှုကို ပြန်သွားပါ 2013-10-03 16:21:38 Traduit Modifier
info_sauvegarde_reussi_04 de votre site. သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ 2013-10-03 16:21:38 Traduit Modifier
texte_admin_tech_01 Cette option vous permet de sauvegarder le contenu de la base dans un fichier qui sera stocké dans le répertoire @dossier@. N’oubliez pas également de récupérer l’intégralité du répertoire @img@, qui contient les images et les documents utilisés dans les articles et les rubriques. ဤရွေးချယ်မှုသည် လမ်းညွှန်မှု@dossier@ ထဲတွင် သိုလှောင်မည့် ဖိုင်များကို ရွေးချယ်ပေးပါမည်။ ​အခန်းကဏ္ဍများနှင့် ဆောင်းပါးများတွင် အသုံးပြုသော ပုံများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများ ပါဝင်သော @img@၊ လမ်းညွှန်မှုများကို ပြန်လည်ရရှိအောင် လုပ်ရန်လည်း မမေ့ပါနှင့်။ 2013-10-03 16:21:38 Traduit Modifier
texte_restaurer_base Restaurer le contenu d’une sauvegarde de la base အရံသိမ်းထားသော အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပါ 2013-10-03 16:21:38 Traduit Modifier
texte_sauvegarde Sauvegarder le contenu de la base အချက်လက်သိုလှောင်မှုအကြောင်ရာများကို အရံသိမ်းဆည်းထားပါ 2013-10-03 16:21:38 Traduit Modifier
texte_sauvegarde_base Sauvegarder la base အချက်လက်သိုလှောင်မှုကို အရံသိမ်းထားပါ 2013-10-03 16:21:38 Traduit Modifier